5 Mashandisiro eBusiness Intelligence Kuita Sense kunze kweBig Data - NewGenApps
Big Data, Big Data Analytics, bhizinesi analytics, Bhizinesi Njere, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Chii chinonzi Bhizinesi Kuchenjera (BI)?
Bhizinesi rekuchenjera (BI) iko kushandiswa kwesoftware nemaalgorithms kuongorora data kuti riitise njere dzinoitisa yekutungamira kwesangano zvine hungwaru uye zvine hungwaru zvisarudzo zvebhizinesi. Maturusi eBI anoongorora uye aratidze seti yedata muchimiro chemishumo, visualizations, matafura, magirafu uye mepu zvinoita kuti vashandisi vanzwisise ruzivo uye vatore mhedziso.
BI inonzi zvakare anotsanangura analytics nekuti zvinoratidza chete yapfuura kana yazvino mamiriro. Michael F. Gorman, purofesa we manejimendi manejimendi uye sarudzo yesainzi paUniversity yeDayton muOhio anotsanangura hunhu hweBI sekuti "Hazvikuudze zvekuita; inokuudza zvaive uye chii zviripo ”. Basa rekupedzisira rekutora zviito zvichibva pane data richiri mumaoko evatungamiriri.
Read More: Chii chinonzi Bhizinesi Njere? Nzira shanu dzekuzviwana.
Kukosha uye Mashandisiro eBusiness Intelligence:
Bhizinesi Njere inopa nhoroondo, yazvino, uye fungidziro maonero esarudzo dzebhizinesi. Izvi zvinogona kuyerwa pane chero bhizimusi basa kubva pakutengesa kusvika mukugadzira kune mari. Hedzino dzimwe nzira idzo business intelligence inoshandiswa nebhizinesi:
1. Kuongorora kweVatengi:
Mazuva ano, vatengi vanobatana nebhizinesi munzira dzakawanda. Kune mawebhusaiti, chatbots, maemail, evanhu vezvenhau, chatbots, mafoni, kupindirana kwakananga uye zvimwe zvakawanda. Iyi yakawedzera nhamba yekubata-bata yakakonzera data kubva kune akawanda masosi. Bhizinesi rekuchenjera inovavarira kubatanidza iyi data kubva kune akawanda masosi kuti uwane yakazara yakazara mutengi. Yakaderera-chikamu data ongororo chete inopa maonero mune zviri kuitika. Ndedzipi nzira dzakashanda uye dzisina kuita. Bhizinesi rekuchenjera inoenda nhanho kumberi uye inoongorora zvinoita zvikonzero nei zano rakashanda kana kukundikana. Izvi zvinobatsira mukumisikidza chikonzero uye hukama hwehukama hwekuwedzera kuongororwa kwehunhu hwevatengi uye zvavanofarira.
Read More: Iko Big Data, AI uye ML inogona kubatsira kuvandudza Vatengi Zvakaitika?
2. Kuvandudza kushanda zvakanaka.
Misika yemazuva ano yakazara. Iyo internet yakazara nezvakawanda, mazano, nyanzvi, zvigadzirwa, masevhisi - zvingangoita zvese. Chese chatinoda chinowanikwa nyore kwatiri. Muzera rino reruzivo uye zvigadzirwa zvakawandisa hapana anoda imwe "iniwo" kambani inongopa imwe "yepachena mhinduro". Bhizinesi rekuchenjera inotungamirira vatungamiri nevaridzi kuti vaise madhora avo mune zviwanikwa zvakakodzera uye zvivakwa. Nekunzwisisa mafambiro emusika business intelligence inogona kupa mazano matsva ebhizinesi, maitiro, maitiro uye nzira. Maonero anogadzirwa anogona kushandiswa kuvandudza mashandiro ebhizinesi.
3. Kutyaira mari:
Bhizinesi rekuchenjera inogona kubatsira kutsanangura iyo chaiyo nzira yekutyaira mari yebhizinesi rako. Inogona kupa ruzivo rwakakosha senge kuti mushandisi wako wekupedzisira ndiani, chii chinopesvedzera sarudzo dzavo dzekutenga, kuti vangazviwanepi uye maitiro ekuita kurira kwako. Nhasi musika wakazara nemakambani ari kusunda ruzivo netarisiro yekutengesa. Bhizinesi rekuchenjera ndiko kuziva kweiyo data chaiyo nezve maitiro emutengi wako akakodzera. Inopa ruzivo sekuti vanodya kupi ruzivo, chii chichavaendesa kushanduko nezvimwe. Neruzivo urwu, unogona kugadzira nzira dzekutengesa dzinowedzera mihoro uye kugadzirisa ROI yezvisarudzo.
4. Kuwana mukana wemakwikwi:
Dzakadzika nzwisiso senge account zvirevo, google analytics nezvimwewo zvinowanikwa kune ese ebhizinesi masangano. Asi maturusi aya uye matekiniki anongopa ruzivo rushoma nezvemusika, makwikwi, uye vatengi. Zvakare, mazhinji echinyakare ekuongorora data maitiro anopa ruzivo mune data rakatotorwa nemakambani. Bhizinesi rekuchenjera inosanganisira kutsvaga kwechipiri data masosi, masiginecha emagariro, mafambiro emusika, nezvimwe kuti zvipe mukana wekukwikwidza kumasangano.
5. Kutarisa matambudziko ebhizinesi:
Bhizinesi rekuchenjera inodarika chirevo chepurofiti nekurasikirwa uye pepa rekuenzanisa kupa ruzivo nezvehutano hwechokwadi hwesangano. Mazhinji maBI application anogona kusanganisa neyako accounting software kuti uwane mafambiro angazoramba akavanzwa kubva kune vatongi. Bhizinesi rekuchenjera haina kugumira pakutevera KPIs (kiyi yekuita zviratidzo), inosanganisira kufanotaura kudzivirira mabhodhoro uye nguva yakakosha sarudzo sekutenga kana kuhaya. Nekuratidza dhata kubva kumakona akawanda BI inogona kuratidza matambudziko ayo anowanzo kupotsa mumaitiro echinyakare ekuongorora.
Kuzvishandira-Service Bhizinesi Njere (SSBI) - Iyo Inotevera Chikamu cheBI:
Kuzvishandira business intelligence (SSBI) maitiro matsva muBI apo softwares uye maturusi anogadzirwa kuwanda uye ari nyore kupfuura kare. Chinangwa ndechekugadzira business intelligence inowanikwa kune wese munhu kusanganisira vanhu vasina ruzivo rwehunyanzvi kana nhamba. Zvinosanganisira kurerutsa masisitimu azvino uye maitiro ekupa mamwe akatwasuka uye anobatika maonero. Zvishandiso zvakaita seTableau zvinokwanisa kuita izvi kusvika pamwero wakati. Nekufambira mberi mukati machine learning uye ongororo yedata, ichi chiroto chichava chakanyanya kuitika uye chinokwanisika.
Ndekupi Kwauchazoda Ruzivo Rwakananga?
Bhizinesi rekuchenjera yave kuwanikwa nemunhu wese. Nekufambira mberi kweSSBI, kupinda mumusika kweBI kuchashanduka zvakanyanya zvichitungamira kuwanda kwenhamba yemabhizinesi anoshandisa tekinoroji iyi. Asi business intelligence richiri rinotsanangura muzvarirwo. Ichakuudza nezve yazvino mamiriro uye zviitiko zvekare asi inotadza kufanotaura ramangwana. Zvinhu zvakaita semafambiro emusika nemabatiro evatengi hazvibvi panhoroondo chete asiwo pane mamwe mametrics semaitiro evapesvedzera, hunyanzvi hwekukanganisa matekinoroji nezvimwe. Kuita pfungwa dzakakwana kubva business intelligence masikirwo aunozoda nyanzvi dzedata kutungamira kuita sarudzo. Pamusoro pezvo, nekumhanya kwazvino kwekuwedzera data, zvinopfuura kugona kwemasangano ega ega kuongorora data hombe pamwero. Kune izvi vachada vagadziri vemakore uye maturusi makuru edhata seHadoop neSAS izvo zvinoda hutungamiriri hwenyanzvi. Kana iwe uchitsvaga data masayendisiti kuti akubatsire kuita zvine musoro kubva kune hombe data saka iwe uri panzvimbo chaipo. Nechiitiko chakajeka chekushanda pane akasiyana maturusi ekuongorora data isu tiri NewGenApps, vanokwanisa kupa business intelligence pachiyero. Bata nesu nhasi kuti tibvunze mahara, POC kana chirongwa.